चीनको विकास र हाम्रो सपना | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण चीनको विकास र हाम्रो सपना
on: September 09, 2018 लेख | दृष्टिकोण
चीनको विकास र हाम्रो सपना
विकासको एउटै मोडल सबै देशमा काम लाग्ने हुँदैन, आआफ्नै मोडल हुन्छ । भूबनोट, जनसङ्ख्या, प्राकृतिक स्रोत, सांस्कृतिक मान्यता आदिले विकासको मोडल तय गर्छन् । यी सबैमाथि राजनीति हाबी हुन्छ । विश्व सभ्यतामा ठूलो योगदान दिने चीन कुनै समय सुस्तायो, अनगिन्ती पीडा भोग्न बाध्य भयो । राजनीतिक युद्धले निकास थालेकै बेला सन यात सेनको लोकप्रियताले काम गरेन, अवसरवादीहरू हाबी भए र माओको सैनिक विद्रोहले सत्ता हत्यायो । तर, आजको चीनको विकास माओको मोडल होइन । उनको मृत्युपछि तेङ स्याओ पिङले विकासको चिनियाँ मोडल बनाए । यो आर्थिक र राजनीतिक मोडलले चीनमा आठ गुणासम्मको आर्थिक विकास हुन थाल्यो । अहिले चीन विश्व अर्थतन्त्रमा दोस्रो ठूलो शक्तिशाली हैसियतमा पुगेको छ । अर्बौं मानिस गरीबीबाट माथि उठेका छन्, अर्बपतिको सूचीमा पर्नेहरू नै सयौं छन् । चीन विश्वलाई नै अचम्ममा पार्ने गरी पूर्वाधार विकासमा अगाडि छ । औद्योगिक उत्पादनमा अगाडि बढिरहेको छ । तर, यसका ऐतिहासिक धरोहर, मान्यता र संस्कार पनि उत्तिकै विस्मयकारी छन् । चीनको यो विकासलाई नजीकैबाट हेर्ने अवसर पाएँ । १ महीना बेइजिङमा बसेर त्यहाँका मानिस र उनीहरूको कार्य संस्कृति हेर्न पाएँ । उनीहरूको विकासको गति हेरेर हाम्रो गति किन सुस्त भन्ने लाग्यो र उनीहरूको विकासको कारण खोतल्न प्रयास गरेँ ।
आधुनिक औद्योगिक पार्क, तीव्रगतिको रेल, चम्किला पूर्वाधार, अग्ला भवन, फराकिला सडक र उच्चतम व्यवस्थापन । साँच्चै शानदार बेइजिङ, विश्वासै गर्न नसकिने गरी चलायमान शहर । त्यसैले विकासशील देशले आजभोलि उदार लोकतन्त्रभन्दा ‘चिनियाँ मोडल’ आकर्षक देखिरहेका छन् । कोहीकोही त विकासका लागि अधिनायकवादी शासन चाहिन्छ भन्ने पनि छन् । तर, विकासका लागि सबैभन्दा आवश्यक कुरा स्पष्ट मार्गचित्र, सुशासन र समयमा काम गर्ने प्रवृत्ति नै हो । हामीसँगको अन्तरक्रियामा बेइजिङ युनिभर्सिटी अफ कल्चरका प्राध्यापक सी हाइचुले चीनको विकासका तीन कारण औंल्याए : स्पष्ट योजना, कडा मेहनत र हरेक काम समयभित्रै सम्पन्न गर्ने प्रवृत्ति । चीनको विकासको गति नाप्न ‘बर्ड नेष्ट’ हेरे पुग्छ । मात्र ६ महीनामा यो विशाल संरचना तयार भएको थियो । उनले बेइजिङमा सफलताको अर्थ जीवनस्तर भएको बताए । हरेक मानिस आफ्नो जीवनस्तर उकास्न हतारमा दौडिइरहेका छन्, खटिरहेका छन् । त्यही खटाइको परिणाम हो : चीनको समृद्धिको गति । हामी पनि कम खटेका छैनौं, तर यहाँ स्पष्ट योजना र व्यवस्थापनमा कमी देखिन्छ ।
सन् २०१७ को १९ औं पार्टी महाधिवेशनमा राष्ट्रपति सी जिनपिङले आत्मविश्वासपूर्वक घोषणा गरे – ‘मानवजातिले सामना गरिरहेको विभिन्न समस्याको चिनियाँ समाधानबाट अन्य राज्यले पनि सिक्नुपर्छ ।’ उनको यो भनाइले चीन विश्व राजनीतिमा आप्mनो उपस्थिति फैलाउने रणनीतिमा रहेको स्पष्ट हुन्छ । ‘एक क्षेत्र एक मार्ग’ यसका लागि उसले अपनाएको ठूलो रणनीति हो । नेपालले यस अभियानमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यसै अभियानको भित्री मर्मले हामीलाई चीन भ्रमणको अवसर जुराएको हो । बेइजिङ नगरपालिका र बेइजिङ इण्टरनेशनल चाइनिज कलेजको सहकार्यको कार्यक्रममा हामी त्यहाँ पुगेका थियौं । चीनको आजको हैसियत उसले अपनाएको ‘विकासको चिनियाँ मोडल’ नै हो । ठूलो जनसङ्ख्या, समृद्ध इतिहास, मेहनती जनता, सुशासन, स्पष्ट योजना र व्यवस्थापन चीनको विकासको मोडल हो । यसमा विदेशी लगानी र प्रविधि जोडेपछि चीन विकासतिर लम्कियो । खासमा उनीहरूले भोगेको दासताको पीडाले उनीहरूमा स्वबोधको भाव जगाइदियो र उनीहरू असाध्यै मेहनती भए । निर्यात निर्देशित अर्थतन्त्रले चीनबाट गरीबी हटायो । यो मोडेल हाम्रा लागि उपयोगी देखिन्न । तर, गरीबी निवारणमा चीनले प्राप्त गरेको उपलब्धि विश्वकै लागि अनुकरणीय छ । तर, चीनले पश्चिमी शैलीको लोकतन्त्रलाई नकार्छ । चिनियाँहरू राजनीतिक बहसमा समय खेर फाल्दैनन् । तर, राज्यले लिएको नीतिअनुसार विनाविरोध सबै काम हुने रहेछ । त्यहाँ ‘मेरिटोक्रेसी’ हाबी भएको देखिन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीको अधिनायकत्व भनिए पनि त्यहाँ चुनिने मानिसको कार्यक्षमता र प्रतिस्पर्धाको मूल्याङ्कन हुने रहेछ । त्यसरी राज्यको नीतिमा सबै चल्ने भएकाले चीनमा आर्थिक प्रगति भएको हो भन्न सकिन्छ । तर, केही नेपालीले सोचेजस्तो अधिनायकवादकै कारण चीनले पूँजीवादी सफलता हात पारेको चाहिँ होइन ।
सन् १९७८ मा तङ स्यायो पिङले खुला बजारको नीति अपनाएपछि चीनले आर्थिक सफलता प्राप्त गरेको हो । तर, यसको आधार अधिनायकवाद होइन । अधिनायकवादकै कारण विकास हुन्थ्यो भने माओको पालामा कराडौं मानिस मानवनिर्मित अनिकालले मर्ने थिएनन् । यति बेला कृषि उत्पादन घटेको थियो, भोकमारी व्याप्त थियो र कम्युन र सहकारीहरूको प्रभावकारिता कम थियो । सोभियत सङ्घको विकास मोडलले काम गरेको थिएन । तर, चीनको कर्मचारीतन्त्रमा सुधार गरेर देङले चीनको एकदलीय व्यवस्थाभित्र उत्तरदायित्व, प्रतिस्पर्धा र शक्तिमा आंशिक नियन्त्रणजस्ता लोकतान्त्रिक चरित्रलाई प्रवेश गराए र विकासको ढोका खोलिदिए ।
जोसुवा कुपर रामोले ‘द बेइजिङ कन्सेन्सस’ भन्ने शब्दावली जन्माएका छन् । उनले चीनको अन्वेषणमा आधारित विकास मोडलको व्याख्या गर्न यो शब्दावली प्रयोग गरेका हुन् । यस्तो मोडलमा ‘आर्थिक प्रगति कुल गार्हस्थ उत्पादनमा भएको वृद्धिबाट होइन, दिगोपन र समानताको आधारमा’ मापन गरिन्छ । अत्यन्त विशाल जनसङ्ख्या, अत्यन्त विशाल क्षेत्र, अत्यन्त लामो इतिहास र अत्यन्त सम्पन्न संस्कृतिको मिश्रणले यो मोडल सृजना गरेको हो । चिनियाँ मोडल पनि ठाउँपिच्छे फरक र कहिलेकाहीँ त परस्परविरोधी समेत देख्न सकिन्छ । चीन त्यस्ता देश हो जहाँ शासनविधि नै फरकफरक छ । मकाउ, हङकङ पनि चीन नै हो तर त्यहाँको आर्थिक र राजनीतिक तन्त्र फरक छ । मेनल्याण्ड चीनको दाँजोमा मकाउ र हङकङ निकै विकसित छन् ।
देङको नेतृत्वमा सुधारवादीहरू औद्योगिकीकरण र आर्थिक वृद्धिका लागि आफ्नो तरीका लाद्न लागिपरेनन् । उनीहरूले स्थानीय स्तरको नेतृत्वलाई आफ्नो समुदायमा स्थानीय स्रोतसाधनकै प्रयोग गरेर विकासको शुरुआत गर्न प्रेरित गरे । यो विकेन्द्रीकरण मात्र थिएन । यसमा स्थानीय नेतृत्वलाई कामको सीमा तोक्न, नीतिगत सुधारको पहल गर्न तथा साङ्गठनिक सफलताको मापदण्ड तयार गर्न केन्द्रले निर्देशन गर्‍यो तर हस्तक्षेप गरेन । चिनियाँ नेतृत्वले नागरिक समाजलाई राजनीतिक अधिकार दिएको छैन । तर, कर्मचारीतन्त्रलाई नयाँ पहल गर्न र नवप्रवर्तन गर्न भने स्वतन्त्रता दिएको छ । राज्यको पूँजीमा नयाँ प्रवर्तनका साथ उद्योग व्यवसाय गर्न त्यहाँका नागरिकलाई स्वतन्त्रता छ । त्यही भएर जग्गाप्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनजस्ता विषयमा चीन अलमलिँदैन । अनुसन्धान केन्द्रहरू थुप्रै छन्, तिनले शहरीकरण, भवन निर्माणलगायत पूर्वाधारमा अनुसन्धान गरी नयाँ प्रविधि पत्ता लगाउँछन् । पश्चिमा प्रविधिमा आफ्नो सस्तो जनशक्ति प्रयोग गरेर उसले प्रविधि भित्र्यायो । त्यही प्रविधिमा नवप्रवर्तन गरी आफ्नो प्रविधि मिसाउँदै छ । अहिले पनि चीनको अर्थतन्त्रको मूल पश्चिमी प्रविधि नै हो । त्यहाँका मानिसमा पश्चिमप्रतिको आकर्षण पनि उत्तिकै रहेछ ।
चीनजस्तै हामी समृद्ध बन्न सक्दैनौं तर त्यसबाट सिकेर विकासको गति अघि बढाउन भने सक्छौं । तर, सही योजना र तिनको कार्यान्वयन गर्ने शक्ति हामीसँग छैन । समृद्धिका आधार टन्नै भएर पनि हामी अव्यवस्था, गतिहीनता र आर्थिक पछौटेको शिकार छौं । त्यसैले नेपालबाट चीन पुग्ने प्रायः मानिस मजस्तै त्यहाँको चम्किला पूर्वाधार र अग्रपङ्क्तिमा रहेका चिनियाँ शहरको बढ्दो सम्पत्ति देखेर मोहित हुन्छन् । वामपन्थी झुकाव भएका व्यक्ति यसको श्रेय त्यहाँको कम्युनिष्ट सरकार भएको निष्कर्ष निकाल्छन् । तर, १९४९ देखि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले सत्ता सम्हाले पनि एकदलीय शासन चलिरहे पनि उदारीकरण र आर्थिक स्वतन्त्रतापछि नै त्यहाँको विकासले गति लिएको देखिन्छ ।
चीनको विकासमा माओवाद कि देङवाद, केन्द्रीय योजना कि विकेन्द्रीकरण, सामूहिक लगानी कि निजी पूँजी, केले ठूलो भूमिका खेलेको छ भन्ने ठोकुवा गर्न सकिन्न । चिनियाँहरू पनि यसमा यही भन्न सक्दैनन् । तर, प्राध्यापक सी हाइचुले भनेझैं उनीहरूको मेहनत र समयमा काम गर्ने प्रवृत्ति र जिम्मेवार प्रशासन भने मुख्य कारण हो । राष्ट्रपति सीले देशलाई ‘चिनियाँ बुद्धि’ र ‘चिनियाँ समाधान’बाट सिक्न विश्वलाई आग्रह गरेका थिए । उनको भनाइबाट अन्य देशसँग आफ्नो विकासको ज्ञान बाँड्न चीन चाहन्छ भन्ने देखिन्छ । त्यसैले उनीहरूको व्यवहार र उनीहरूको कार्यशैलीबाट नेपाल र नेपालीले सिक्नुपर्ने र सिक्न सक्ने कुरा थुप्रै छन् ।
हामीले पनि विकास प्रक्रियामा निकै प्रयोग गरेका छौं, राजनीतिक पद्धतिमा निकै परिवर्तन गरेका छौं । तर, कर्मचारीतन्त्र र उसको कार्यशैली सुधार्न सकेनौं, उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन सकेनौं । त्यस्तै स्थानीय सरकारलाई काम गर्न सिकाएनौं वा दिएनौं । स्थानीय ज्ञान तथा स्रोतमा निर्भर रहने गरी उनीहरूलाई सिकाउन, प्रोत्साहन गर्न, स्रोत दिन केन्द्र अझै मानिरहेको छैन । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको असहयोगका कारण स्थानीय सरकारले काम गर्न सकिरहेको छैन । चीनले जस्तै केन्द्रले स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्ने हो उसलाई सबल बनाउने हो भने पक्कै पनि सङ्घीयताले विकासलाई गति दिन सक्छ । चीनको जस्तो धेरै र सस्तो जनसङ्ख्या हामीसँग नभएकाले निर्यातकेन्द्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रभावकारी देखिन्न । तर पनि चीनको समृद्धिबाट हामीले सिक्न सक्ने पाठ धेरै छ ।
Dr. Jeevan Adhikari
सुन्दर एवं जानकारीमूलक मानसिकता परिवर्तनको खाँचो औंल्याउने आलेख ! बधाइ छ लेख र भ्रमण अनुभव दुबैका लागि ।
एक जना पत्रकारले विदेश भ्रमण गर्दा यत्तिकाे जानकारी राख्छ र जानकारी गराउन सक्छ तर देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले पटक पटक त्यस्ता कैंयाै मूलुक घुमेर पनि विकासकाे निकास निकाल्न चासाे दिंदैनन किन? नेताले कसका लागि काम गर्छन जनता सचेत हुन सके चेत खुल्थ्याे कि ।
LeaveaReply to Dr. Jeevan Adhikari Cancel Reply